तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ ? गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस् ! – live 60media
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ –
निद्रा नलागेर वाक्क हुनुहुन्छ ? उसोभए सुत्नुअघि ४ सेकेन्डसम्म…
रातो गुलाबी ओठ चाहानुहुन्छ ? कहिल्यै नगर्नुहोस् यी ६ गल्ती, विस्तारै…
← विमान दुर्घटना हुँदा चालक सहित दश जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
कोलेस्ट्रोल बढेपनि देखिन्छ आँखाको वरिपरी यस्तो दाग, यसरी पाउनुहोस् राहत →